Guddiyada Dastuurka oo soo gaba-gabeeyay Habraacii Doodda iyo Ansixinta Dastuurka KMG – Kalfadhi
Guddiyada Dastuurka oo soo gaba-gabeeyay Habraacii Doodda iyo Ansixinta Dastuurka KMG
August 29, 2020 August 29, 2020 Hassan Istiila
25 Agoosto 2020, Guddiyada Dib u eegista Dastuurka ee heer Federaal oo kala ah Guddiga La-socodka Dastuurka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyo Guddiga Madaxabanaan ee dib u eegista iyo Hirgalinta Dastuurka ayaa soo gabo-gabeeyay Habraacii Doodda iyo Ansixinta Dastuurka KMG.
Habraacan oo la horgeeyay 27/11/2019, Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya labadiisa Gole oo wada fadhiya si ay wadajir ugu ansixiyaan ayaanan wali la ansixinin, taasoo keentay in guddiyadu wax-ka-bedel labaad ku sameeyaan si labada Gole kulamo kala gaar-gaar ah ugu ansixiyaan waqtiyadan dhaw.
Waxaa kasoo baxay shirka Guddiyada:
1) In Guddiyadu ay la kulmaan Guddoonnada Baarlamaanka FS labadiisa Gole kadibna;
2) In ay ansixiyaan Habraaca Ansixinta Dastuurka kulamadooda ugu horeeya;
3) In qaybta farsamada Dastuurka ee dib u eegista lagu sameeyay khiyaas ahaanna ah 80% loo qaybiyo Labada gole si kala gaargaar ah mariyaana akhrinta koowaad iyo akhrinta labaad(doodda);
4) in Qodobada Wadaxaajoodka siyaasadeed u baahan ahna 20% lagu cadaadiyo in ay ka heshiiyaan Xukuumadaha Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada;
5) In shirarka masiiriga ah oo waddanka ka dhacayo ajandayaashooda lagu daro dhamaystirka Dastuurka.
Isla galinkii danbe iyo maalintii ku-xigtay ee 26 Agoosto 2020, ayaa Guddiyada oo wadajira waxay kulamo kala gaargaar ah la qaateen Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullahi iyo Guddoomiyaha Golaha Shacabka mudane Maxamed Mursal Sh Cabdiraxman sida ay u kala horreeyaan, kulamadan Guddoonada iyo labada guddi ayaa sidii ballantu aheyd lagu falanqeeyey arrimaha dib u eegista Dastuurka iyo sidii loo dardargelin lahaa waqtiga u harey Baarlamaanka 10-aad howlaha Dastuurka ee hortabinta leh ee kasoo baxay kulankii labada guddi sida ansixinta Habraaca dastuurka iyo waliba in Baarlamaanka loo qaybiyo Qabyo Qoraalka si ay ugu sii bilaabaan akhrinta koowaad iyo akhrinta labaaad(Doodda) dib u eegista Dastuurka ee dhanka farsamada ah. Guddoonnada Baarlamaanka FS ayaa u mahadceliyay Guddiyada howsha ay soo dhammaystireen ee dib u eegista, aqbalayna codsigoodii ahaa in Dastuurka la dardargaliyo kalfadhigan 7-aad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Kulamada Guddiyada Dastuurka ay la yeelanayeen madaxda Qaranka ayaa lagu soo gabogabeeyay kulan ay la yeesheen sii hayaha Ra’iisulwasaaraha XFS mudane Mahdi Maxamed Guuleed, ayagoo la wadaagay guulaha laga gaaray dib u eegista Dastuurka iyo caqabadaha hortaagan dhamaystirka Dastuurka. Kulankan oo si wadajir ah guddiyadu ula yeesheen sii hayaha Ra’iisul wasaaraha ayaa waxuu kusoo dhammaday guul, ayadoo la isla gartay xal-u-helidda caqabadaha hortaagan dhammaystirka Dastuurka.
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo daah-furay kalfadhiga labaad ee Barlamaanka Galmudug
Baarlamaanka Galmudug oo maanta yeeshay kulankii 1-aad ee Kalfadhiga Labaad